Lapan'i Infantado | Vaovao momba ny dia
Maria | | kolontsaina, Inona no ho hita
Ny Palace of the Dukes of Infantado, any Guadalajara, no trano tsara tarehy indrindra ao amin'ny tanànan'i Castilian-La Mancha. Nanambara tsangambato iray tamin'ny fiandohan'ny taonjato faha-1480, asan'i Juan de Guas izany niarahany niasa tamin'i Enrique Egas tamin'ny famolavolana ny firavaka ary notohanan'i Lorenzo de Trillo izay naorin'ny didin'i Andriamatoa Íñigo López de Mendoza, faharoa Duke of the Infantado, manodidina ny XNUMX.
Betsaka ny nanoritsoritra azy ho tsy manam-paharoa amin'ny endriny, manondro azy ho santionany kanto manerantany, ary ny fasadany dia iray amin'ireo tsara indrindra amin'ny lapan'ny Renaissance Espaniola.
1 Manintona ny lapan'i Infantado
2 Tranombakok'i Guadalajara
2.1 Ora fitsidihana
2.2 Vidin'ny tapakila
Manintona ny lapan'i Infantado
Ny façade mahafinaritra dia vita amin'ny vatosokay vita amin'ny mazava miharihary avy any Tamajón, tanàna iray 51 kilometatra miala ny tanàna, izay mandrafitra andiana diamondra diamondra izay tsy matetika any Espana ary varavarana lehibe misy fefy roa sy ivelan'ny afovoany, izay toerana misy akany manokana ny palitao Mendoza. Voaravaka be dia be amin'ny loharanon-karena tafiditra ao amin'ny Gothic eropeana toy ny spheres, taqueados, interwoven na florones ary avy amin'ny Hispanic Mudejar toy ny muqarnas sy epigraphs.
Miaraka amin'ny vavahady lehibe sy ny tendron'ny diamondra, ny galeriana ambony dia toerana iray hafa mahaliana indrindra ary koa ny tokotanin'ny tranobe.
Sary | Wikimedia Commons
Ao anatiny, ny Patio de los Leones dia manana tetika Gothic ary ny ensemble dia manjaka noho ny kalitaon'ny pitsopitsony. Izy io koa dia ahitana tarehimarika mifanohitra toy ny griffin sy liona, sary famantarana ny fomban-drazana silamo farany atsinanana. Ny valiny dia fampisehoana mahafinaritra izay vitan'ny zaridaina midadasika, toerana fialamboly nalaina avy tao amin'ny lapan'i Al-Andalus na ireo monasiteran'ny mpanjaka Castilian taloha nampiasainy ho fonenana vonjimaika. Ny fanitsiana azy dia ny mpanjaka toa an'i Felipe II any Austria na i Felipe V avy any Borbón no nisafidy izany hankalazana ny mariazin'izy ireo any.
Ny lapan'ny Infantado any Guadalajara dia malaza ihany koa amin'ny valindrihana miorina amin'ny tranokala Mudejar nanjavona nandritra ny ady an-trano noho ny fahasimbana nateraky ny fanapoahana baomba. Na izany aza, ny sasany amin'ireo efitrano izay voaravaka tamin'ny faran'ny taonjato faha-XNUMX avy amin'ny mpanao hosodoko italianina nokaramain'ny Duke of Infantado fahadimy ho Rómulo Cincinato dia mbola voatahiry.
Ny efitrano Cronos, natokana ho an'ny andriamanitry ny fotoana sy mariky ny zodiaka, ny efitrano ady tamin'ny tantaran'ny tafika Mendozas ary ny efitranon'i Atalanta sy Hipómenes, izay mamerina ny seho avy amin'ny angano grika malaza. Ao amin'ity efitrano farany ity dia misy fatana marbra Carrara tsara tarehy.
Sary | Castilla fizahan-tany - La Mancha
Ny tranombakoka Guadalajara dia mitana ny ampahany amin'ilay tranobe hipetrahana ny tranombakoka faritany tranainy indrindra any Espana. Izy io dia noforonina tamin'ny 1838 ary misy fanangonana maharitra ny arkeolojia, zavakanto tsara ary foko, indrindra.
Ny fanangonana zavakanto kanto no tranainy indrindra amin'ny Museum of Guadalajara. Izy io dia mandrafitra ireo fananana nalaina an-keriny tao am-piangonana nanomboka tamin'ny 1835, ka ny lohahevitr'ireo sanganasa ireo dia ara-pinoana. Ny fanangonana dia vita amin'ny fanomezana sy fividianana sary an-tsary sy sary sokitra 200 mahery izay mandrakotra vanim-potoana hatramin'ny faha-XNUMX ka hatramin'ny faha-XNUMX.
Etsy ankilany, ny fanangonana arkeolojia dia lehibe indrindra ao amin'ity tranombakoka ity ary manangona sombin-javatra avy amin'ny fikarohana natao tany amin'ny faritany. Ny sehatry ny foko dia mahaliana tokoa ny mianatra momba ny fomba amam-panao malaza any Guadalajara.
Ho setrin'izany, manolotra fampiratiana maharitra roa ny Museum Guadalajara: Transit, izay mampiseho ireo zavatra mifandraika indrindra amin'ireo fanangonana natambatra ho antropolojika sy Ny lapan'i Infantado: ny Mendoza ary ny fahefana ao Castilla, izay mandika ny dikany sy ny tantaran'ity fianakaviana ity sy ny lapany ao amin'ireo efitrano fresco noforonin'i Romulus Cincinnatus.
Izy io koa dia mandray fampirantiana vonjimaika maromaro mandritra ny taona. Amin'ny maha-te hahafanta-javatra, ny efitrano fampirantiana vonjimaika dia ny efitranon'Andriana ihany. Ao amin'izy ireo dia voatahiry ny frescoes tamin'ny taonjato faha-XNUMX sy ny ampahany amin'ny valindrihana coffered manan-karena izay nandravaka ny valindrihana.
Ririnina (manomboka ny 16 septambra ka hatramin'ny 14 jona): talata ka hatramin'ny sabotsy manomboka amin'ny 10 maraina. amin'ny 14 hariva. ary manomboka amin'ny 16ora. amin'ny 19 hariva.
Fahavaratra (hatramin'ny 15 Jona ka hatramin'ny 15 septambra): Talata ka hatramin'ny alahady amin'ny 10 maraina. amin'ny 14 hariva.
Alahady sy fialantsasatra: manomboka amin'ny 10 maraina. amin'ny 14 hariva.
Ankapobeny: 3 euro
Nihena: 1,50 euro
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » General » kolontsaina » Lapan'i Infantado